Google Earth တွင် သင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို မှတ်တမ်းတင်နည်း
14 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
ယခု သင်သည် virtual globe ပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော နေရာတစ်ခုကို တွေ့ရှိပါက၊ သင်၏ virtual tour ကို နောင်အကိုးအကားအတွက် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများနှင့် မျှဝေရန်အတွက် သင့်အား virtual tour ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ Google Earth သည် သင့်အား သင်၏ session ကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ၎င်းကို အက်ပ်အတွင်းမှ တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းနိုင်စေပါသည်။
Google Earth တွင် သင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို မည်သို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့
အဆင့် 1. သင့် PC တွင် Google Earth pro အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် 2. ရှာဖွေရေးဘားကိုအသုံးပြု၍ သင်သွားရောက်လည်ပတ်လိုသည့်နေရာအား ရှာဖွေပါ။
အဆင့် 3. အိုကေ၊ ယခု သင်သည် တည်နေရာကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ရှာဖွေခြင်းမစမီ၊ သင်သည် စက်ရှင်ကို စတင်မှတ်တမ်းတင်လိုပေမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကိရိယာဘားရှိ 'မှတ်တမ်း' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ဘတ် Mac OS ရှိ Desktop နောက်ခံမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
အဆင့် 4. စက်ရှင်ကို စတင်မှတ်တမ်းတင်ရန် အနီရောင်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ယခု သင်၏ virtual ခရီးစဉ် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် ရှာဖွေခြင်း အပိုင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
အဆင့် 5. သင် session ကို ပြီးသောအခါ၊ session ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းရပ်တန့်ရန် အနီရောင်ခလုတ်ကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။
အဆင့် 6. ယခု၊ သင်သည် အသံသွင်းခြင်းကို သိမ်းဆည်းလိုပါက 'Save' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 7. မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် အမည်နှင့် ဖော်ပြချက်ကို ထည့်သွင်းပါ။ အသံသွင်းခြင်းကဏ္ဍကို ယခုအခါ အပလီကေးရှင်းအတွင်း သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး နေရာများတက်ဘ်အောက်တွင် ၎င်းကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ဤအသံသွင်းခြင်းကို သင်အလိုရှိတိုင်း ပြန်ဖွင့်နိုင်ပါပြီ။ သင်ဤအရာကို တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်မျှဝေလိုပါက၊ သင်သည် အသံသွင်းခြင်း၏အမည်ပေါ်တွင် right-click နှိပ်ပြီး email option ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် ၎င်းတို့၏ စက်များတွင် ဤအသံသွင်းခြင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အဆက်အသွယ်များထံ အသံသွင်းရန် လင့်ခ်တစ်ခု ပေးပို့နိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော Spinner စက်ကိရိယာကို ပါဝါပေးသည့်နည်းပညာ
နောက်တစ်ခု Google Earth ကို အသုံးပြု၍ ခြေဖဝါးအကွာအဝေးကို တိုင်းတာနည်း